သူများရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ချ ခင်းပြီး ရလာတဲ့ပျော်ရွင်မှုကို အသိ ဥာဏ်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့ မလိုချင်သင့် ဘူး… အမရာငြိမ်း – 8Days Journal
Phone: +959 517 5054,+959 730 80815
သူများရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ချ ခင်းပြီး ရလာတဲ့ပျော်ရွင်မှုကို အသိ ဥာဏ်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့ မလိုချင်သင့် ဘူး… အမရာငြိမ်း
Published: March 18, 20204:25 AM Updated: 4:27 AM
တော်ရုံနဲ့တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မ ဝေဖန်ချင်ဘူး။ အားလုံး သူ့အကြောင်း တရားနဲ့ သူ့ဝဋ်ကြွေးနဲ့သူတော့ ရှိ ကြတာပဲဆိုတော့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လူ့ စည်း၊ ဘီလူးစည်းဆိုတာတော့ နား လည်ရမယ်။ သူများရဲ့ မျက်ရည်တွေ နဲ့ နင်းပြီး ချခင်းပြီးမှ ရလာတဲ့ ပျော် ရွင်မှုကို ညီမမယုံကြည်ဘူး။
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းက လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ပျော်နေရင်ပြီးရော၊ သူများရဲ့ စိတ် ဆင်းရဲမှု၊ သူများမျက်ရည်တွေကို ရင်းနှီးပြီးတော့မှ ရလာတဲ့ ပျော်ရွင် မှုမျိုးကိုလည်း အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူ အနေနဲ့ မလိုချင်သင့်ဘူးလို့ ထင် တယ်။
Previous Previous post: မတော်လို့ ကျည်အစစ်တစ် တောင့် မှားထည့်မိရင် ဒိန်းဆိုသေ မှာ… ကျော်ဆု
Next Next post: 8days ဂျာနယ်မှ မော် ဒယ်လ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် HuGo ရဲ့ အကြောင်း မေးမြန်းပေးစေချင်ပါ တယ်
8 days Web Tv is the famous and popular web tv platform of 8 days journal,the very first of entertainment journal since 2008. Celebrities 8days A Week Journal It coversawide range of many components including Fashion News,Beauty,backstage photos,Fashion trends,Coverstar interviews,Celebrity and supermodels interviews,celebrity’s cooking livings programs,Celebrity party photos,Artists own letters,International celebrity news,Korean waves and Astrology. 8 days journal published on every Thursday and distributed in every sections of Myanmar 8 DAYS journal is the longest running entertainment journal in Myanmar and its size is 16:10 size (known as the journal size). In 2016 ,8 DAYS journal is running another part of the web tv which is known us 8 DAYS TV on Facebook and it has own website www.8days.com.mm .
View all posts by 8days.com.mm →
“အခုနောက်ပိုင်းသရုပ်ဆောင်တွေ တော်တော်ကောင်းလာတယ်” လီယို, ကေကေမိုး ,လီယို
Published: June 25, 20205:17 PM Updated: 5:18 PM
“အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန် မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်လာတာတော့ အမှတ်တရပါပဲ” ဆောင်းယွန်းစံ
Published: May 12, 20205:04 PM
“Music Video မှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေခဲ့တယ်လို့ ယူဆပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်းဂုဏ်ယူမိတယ်” ချမ်းမြေ့မောင်ချို
Published: July 11, 202010:35 AM Updated: 10:36 AM
Weight အရမ်းတက်အောင် မလုပ်တော့ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြည့် ကောင်းအောင်ပဲ ထိန်းတော့တယ် ….. အောင်မင်းခန့်
Published: March 6, 20204:10 AM
“အခုတလောမှာတော့ နည်းနည်းလေး စိတ်ပျော်လာပါပြီ” ဟဲလေး
Published: June 18, 202010:41 AM
“ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်တယ်”….. Dr Eric Yang
Published: May 30, 20209:27 PM Updated: 9:28 PM
“သားလေးကို သူ့ပညာလေးနဲ့ လူတောထဲမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့အထိ အစ်မကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်” ရွှေကြာ (ရွှေကြာပရဟိတ)
Published: June 2, 20206:46 PM
Pearl Condo, No 606,6floor, Block D, Kabar Aye Pagoda Rd, Yangon
+959 517 5054,+959 730 80815